Iimvume zexeshana zoMsebenzi eCanada
Isingeniso kwiimvume zengqesho zesikhashana zabasebenzi baseKhanada
Kunyaka ngamnye abangaphezu kwama-90,000 abasebenzi basexeshana bangaphandle bangene eKhanada ukuba basebenze kwiinkalo ezahlukeneyo zemisebenzi kunye namashishini kulo lonke ilizwe. Abasebenzi bexeshana bezinye iintlanga badinga ukunikezelwa kwemisebenzi evela kumqeshi waseCanada kwaye kwiimeko ezininzi iimvume zomsebenzi zesikhashana ezivela kwi-Citizenship and Immigration Canada ziya kuvunyelwa ukungena eCanada ukusebenza.
Imvume yexeshana yomsebenzi ibhaliwe igunya lokusebenza eCanada ukusuka koBemi kunye no-Immigration Canada kumntu ongeyena ummi waseCanada okanye umhlali waseKhanada osisigxina. Ngokuqhelekileyo isebenza kumsebenzi othile kunye nobude besikhathi.
Ukongeza, abanye abasebenzi basekuhlaleni bafuna i- visa yokuhlala yesikhashana ukuba bangene eKhanada. Ukuba udinga i-visa yokuhlala yesikhashana, akudingeki wenze isicelo esisodwa - siya kukhutshwa ngexesha elifanayo kunye namaxwebhu afanelekileyo ukuba ungene eKhanada njengomsebenzi wexeshana.
Umntu oza kuba ngumqeshi uya kufuneka ukuba afumane uluvo lweemarike zabasebenzi kwi-Human Resources and Development Skills Canada (HRDSC) ukuqinisekisa ukuba umsebenzi unokuzaliswa ngumsebenzi wasemzini.
Ukuze iqabane lakho okanye umlingane oqhelekileyo kunye nabantwana abaxhomekeke kuyo ukuba bahambe kunye neKhanada, kufuneka bafake isicelo semvume. Akudingeki ukuba bazalise izicelo ezihlukeneyo, nangona kunjalo. Amagama kunye nolwazi olufanelekileyo kumalungu osapho osondeleyo angabandakanywa kwisicelo sakho somvume wexeshana yomsebenzi.
Inkqubo kunye namaxwebhu afunekayo ukuba asebenze okwethutyana kwiphondo laseQuebec ahluke, ngoko ke khangela i-Ministère de l'Immigration kunye ne-Communautés ngokwemveli ngolwazi.
Ngubani Ofuna Imvume Yesikhashana Yomsebenzi eCanada
Xa imvume yexeshana yeCanada iyadingeka
Nabani na ongeyena ummi waseCanada okanye umhlali waseKhanada osisigxina ofuna ukusebenza eCanada kufuneka agunyaziswe. Ngokuqhelekileyo, oko kuthetha ukufumana imvume yemisebenzi yexeshana yeKhanada.
Xa imvume yexeshana yeCanada ayimfuneko
Abanye abasebenzi bexeshana abayidingi imvume yemisebenzi yexeshana yeKhanada. Izigaba zabasebenzi abakhululwe ekufuneni imvume yemvume yesikhashana zibandakanya izidibanisi, abadlali bezemidlalo, abafundisi kunye namaNgqina angcali. Ezi zizathu zingatshintsha naliphi na ixesha, ngoko nceda ukhangele i-visa ofisi ejongene nommandla wakho ukuqinisekisa ukuba ukhululekile kwimvume yexeshana yomsebenzi.
Iinkqubo ezizodwa zoMsebenzi wexeshana zokusebenza
Ezinye iindidi zemisebenzi eCanada ziye zahlenga iinkqubo zokufaka isicelo semvume yexeshana yomsebenzi okanye zineemfuno ezahlukileyo.
Abasebenzi beTeknoloji yoLwazi
Abantu Bashishini Abafihlakeleyo Izivumelwano Zentlalo-ntle
Ukufaneleka ukufaka isicelo njengoko ufaka iCanada
Unokufaka isicelo semvume yexeshana yomsebenzi njengoko ufaka iCanada ukuba uhlangabezana nezi mfuno zilandelayo:
ungumhlali okanye umhlali onogxina we-United States, iGreenland okanye iSaint-Pierre ne-Miquelon
awudingi ukuhlolwa kwezokwelapha
awudingi i-visa yokuhlala yesikhashana ukutyelela eKhanada
umsebenzi wakho awudingi uluvo lweemarike zabasebenzi kwiiNkonzo zabasebenzi kunye noPhuhliso lwezakhono eKhanada (HRSDC) okanye unemboniselo yemarike yomsebenzi kwi-HRSDC.
Iimfuneko zeMvume yexeshana yokusebenzela eCanada
Xa ufaka isicelo semvume yesikhashana eKhanada, kufuneka unelise igosa le-visa eliphonononga isicelo sakho
Uya kuphuma eCanada ekupheleni kwemvume yakho yomsebenzi
Unayo imali eyaneleyo yokuzixhasa wena namalungu entsapho ngelixa useCanada, kwaye unele ukubuyela ekhaya
azinenjongo yokusebenza eCanada ngaphandle kokuba ugunyaziwe
iya kuba ngumthetho ohlala
abanakho irekhodi lomsebenzi wezobugebengu (iSatifikethi sePolisi sinokufuneka)
ayingozi umngcipheko weCanada
unempilweni enempilo (uvavanyo lwezonyango luyafuneka)
Amaphepha adingekayo ukuba afake isicelo seMvume yexeshana yokusebenzela eCanada
Ngokubanzi, amaphepha alandelayo kufuneka afake isicelo semvume yesikhashana yeKhanada. Hlola ulwazi olunikezwe ngetekiti yesicelo ngononophelo malunga neenkcukacha kwaye xa kukho ezinye iimfuneko ezifunekayo kwiimeko zakho ezithile. Kukho nakwimfuneko yeengingqi ezongezelelweyo, ngoko qhagamshelana ne-ofisi yakho ye-visa yasekuhlaleni ukuqinisekisa ukuba unamaphepha afunekayo phambi kokuhambisa isicelo sakho semvume yexeshana yomsebenzi.
Ubungqina besazisi - ipasipoti evumelekileyo okanye uhambo lokuhamba kuwe kunye nelungu ngalinye lentsapho elihamba nani. Ukuba ilizwe elikhupha ipasipoti yakho lifuna imvume yokungena kwakhona, kufuneka ube nayo ngaphambi kokuba ufake isicelo semvume yexeshana yeKhanada. Abemi kunye nabemi basisigxina baseMelika, iSaint-Pierre, neMiquelon, kunye neGreenland ayifuni iipassports kodwa zifuna ubungqina bendawo kunye nobumi. Kumele unikeze ezimbini iifoto zepasipoti zamva nje.
Ubungqina beNgqesho eCanada - ukunikezelwa kwemisebenzi ebhaliweyo okanye isivumelwano kunye nomntu oza kuba ngumqeshi
Ubungqina bemiQangatho - ubungqina bokuthi uhlangabezana neemfuno zomsebenzi, kubandakanya iimfuno zemfundo kunye namava omsebenzi
Ukuqinisekiswa kwe-HRDSC - ukuba kuyimfuneko kumsebenzi wakho, umqeshi oza kuba ngumqeshi kufuneka afumane uluvo lwemakethi yomsebenzi kunye nokuqinisekiswa kwi-Human Resources and Skills Development Canada (HRDSC) kwaye ikunike inombolo yenombolo yeefayile
Isiqinisekiso seQuebec sokuMkela (i-CAQ) - kufuneka ukuba uceba ukusebenza kancinci kwiphondo laseQuebec. Hlola i-Ministère de l'Immigration kunye ne-Communautés indawo yezobugcisa iinkcukacha.
Isimo sokufuduka kwilizwe leSicelo - ukuba awuyena ummi welizwe osebenza kuyo, kufuneka unikezele ubungqina bendawo yakho yangoku yokufuduka.
Kufuneka uvelise nayiphi na eyongezelelweyo imibhalo ecelwe.
Indlela yokufaka isicelo seMvume yexeshana yokusebenzela eCanada
Ukufaka isicelo semvume yexeshana yeKhanada:
Khuphela isitifiketi somsebenzi wesicelo semvume yesikhashana kunye nekhokelo ( PDF ). Unokuqhagamshelana ne-ambassy yaseKhanada, ikhomishini ephakamileyo okanye i-consulate ejongene nommandla wakho ukuba ube neyethutyana yomsebenzi wesicelo semvume yokuthumela iposi.
Funda isicatshulwa ngokucophelela. Imirhumo yokucwangcisa isicelo semvume yexeshana yomsebenzi ayibuyiswa, ngoko qiniseka ukuba unelungelo lokufumana imvume yemvume yesikhashana kwaye unokuhlangabezana neemfuno ngaphambi kokuba usebenzise.
Gcwalisa ifom kwaye unamathisele amaxwebhu afunekayo. Ukuba awuhambanga yonke imiyalelo okanye unganiki amaxwebhu afanelekileyo, isicelo sakho singabuyiselwa kuwe okanye silibale. Uphawu kunye nosuku lwakho isicelo. Khangela ngokukhawuleza ukuba ugqibe ngokupheleleyo isicelo kwaye udibanise onke amaxwebhu afunekayo. Yenza ikopi yesicelo sakho kwiirekhodi zakho.
Bhatala imali kwaye ufumane irisidi esemthethweni. Hlola kwiofisi yakho ye-visa yasekhaya kwiimirhumo kunye nendlela yokuhlawula ngayo.
Hambisa isicelo sakho. Ukufumana iinkcukacha ngeendlela ezamkelweyo zokuthumela isicelo sakho, qhagamshelana neofisi ye-visa ejongene nommandla wakho.
Ixesha leCandelo loCwangciso lweeNkqubo zeMvume yokuSebenza ngexeshana zeChanada
Amaxesha okucubungula ahluka kakhulu kuxhomekeke kwiofisi ye-visa ejongene nokucwangcisa isicelo sakho semvume yexeshana yomsebenzi. ISebe loBemi kunye no-Immigration Canada lugcina ulwazi lweenkcukacha kwixesha lokucwangcisa ukunika ingcamango yokuba iifisi ezide kwii-ofisi zee-visa zithathile ixesha elidlulileyo ukusetyenziswa njengesikhokelo esiqhelekileyo.
Abemi bamazwe athile bangadinga ukuzalisa izimo ezongezelelweyo ezingabongeza iiveki eziliqela okanye ngaphezulu kwixesha eliqhelekileyo lokucwangcisa. Uya kucetyiswa ukuba le mfuneko iyasebenza kuwe.
Ukuba ufuna iimvavanyo zonyango, ingafaka iinyanga ezininzi kwixesha lokucwangcisa isicelo. Nangona ngokungekho uvavanyo lwezonyango olufunekayo ukuba uceba ukuhlala eCanada ngeenyanga ezingaphantsi kweenyanga ezintandathu, kuxhomekeke kulohlobo lomsebenzi oza kuba nawo kunye nalapho uhlala khona kulo nyaka odlulileyo. Uvavanyo lwezokwelapha kunye novavanyo olwenelisayo lwezonyango luya kufunwa ukuba unqwenela ukusebenza kwiinkonzo zempilo, ukunakekelwa kwabantwana, okanye kwimfundo ephambili okanye ephakamileyo. Ukuba ufuna ukusebenza kwimisebenzi yezolimo, kufuneka uhlolwe unyango ukuba uhlala kumazwe athile.
Ukuba ufuna ukuhlolwa kwezokwelapha, igosa laseKhanada lokuthunyelwa kwelinye ilizwe liya kukuxelela kwaye likuthumele imiyalelo.
Ukuvunyelwa okanye Ukulahlwa kwesicelo seMvume yexeshana yokusebenzela eCanada
Emva kokuphonononga isicelo sakho semvume yexeshana yomsebenzi weKhanada, igosa le-visa lingenza isigqibo sokuba udliwano-ndlebe nawe kufuneka. Ukuba kunjalo, uya kwaziswa ngexesha kunye nendawo.
Unokucelwa kwakhona ukuba uthumele ulwazi olungaphezulu.
Ukuba ufuna ukuhlolwa kwezokwelapha, igosa laseKhanada lokuthunyelwa kwelinye ilizwe liya kukuxelela kwaye likuthumele imiyalelo. Oku kungongeza iinyanga ezininzi kwixesha lokucwangcisa isicelo.
Ukuba isicelo sakho seMvume yexeshana yomsebenzi siyavunyelwa
Ukuba isicelo sakho semvume yexeshana yomsebenzi sivunyiwe, uya kuthunyelwa incwadi yokugunyazwa. Nika le ncwadi yokugunyazwa nawe ukuba ubonise iziphathamandla zokufuduka xa ungena eCanada.
Incwadi yokugunyazwa ayikho imvume yemisebenzi. Xa ufika eCanada, uya kufuneka ukwanelise igosa le-Arhente yeeNkonzo zeCanada ukuba uvumelekile ukungena eKhanada uze ushiye iCanada ekupheleni kokuhlala kwakho kugunyazisiweyo. Ngelo xesha uya kukhutshwa imvume yemisebenzi.
Ukuba uvela kwilizwe elifuna i-visa yokuhlala yesikhashana, i-visa yokuhlala yesikhashana iya kukhutshwa kuwe. I-visa yokuhlala yesikhashana yincwadi esemthethweni efakwe kwipaspoti yakho. Umhla wokuphelelwa yisikhathi kwi-visa yokuhlala yesikhashana ngumhla omele ungene ngawo eKhanada.
Ukuba isicelo sakho seMvume yexeshana yomSebenzi iphendukile
Ukuba isicelo sakho semvume yexeshana yomsebenzi siyachithwa, uya kwaziswa ngokubhaliweyo kwaye ipasipoti yakho kunye namaxwebhu aya kubuyiselwa kuwe ngaphandle kokuba amaxwebhu aphanga.
Uya kukwaziswa kwakhona ukuba kutheni isicelo sakho senqatshelwe. Ukuba unemibuzo malunga nokukhanyeka kwesicelo sakho, qhagamshelana ne-ofisi ye-visa ekhuphe ileta yokulahla.
Ukungena eCanada njengomSebenzi wesikhashana
Xa ufika eCanada igosa leeNkonzo zeeNkonzo zeCanada liza kucela ukuba ubone iipasipoti kunye namaxwebhu okuhamba kwaye ikubuze imibuzo. Nangona isicelo sakho somvume wexeshana yomsebenzi weKhanada sivunyiwe, kufuneka unelise igosa ukuba unelungelo lokungena eCanada kwaye uya kuphuma eCanada ekupheleni kokuhlala kwakho kugunyazisiweyo.
Amaphepha adingekayo ukungena eCanada
Ngaba la maxwebhu alandelayo alungele ukubonisa igosa leeNkonzo zeeNkonzo zeKhanada yaseKhanada:
ipasipoti evumelekileyo okanye uhambo lokuhamba (abemi kunye nabemi basisigxina base-United States, iSaint-Pierre kunye neMiquelon, kunye neGreenland kufuneka banikele ubungqina bokuba ngabemi okanye ukuhlala ngokusisigxina
i-visa yokuhlala yesikhashana (xa kufuneka)
yakho ileta yokunikezelwa kwengqesho okanye isivumelwano somsebenzi
ileta yesigunyaziso eqinisekisa ukuvunyelwa kwesicelo sakho somvume wesikhashana weKhanada
amanye amaxwebhu aphakanyiswe yiofisi ye-visa apho usebenzise khona
Imvume Yakho Yesikhashana yeCanada
Ukuba uvumelekile ukungena eKhanada, igosa liya kukhupha imvume yakho yesikhashana. Hlola imvume yesikhashana yokusebenza ukuqinisekisa ukuba ulwazi luchanekile. Imvume yexeshana yomsebenzi iya kubeka iimeko zokuhlala kunye nokusebenza eCanada kwaye ingaquka:
uhlobo lomsebenzi ongayenza
ubude bexesha unokusebenza eCanada
Ukwenza utshintsho kwiMvume Yakho Yesikhashana
Ukuba nayiphi na imeko iimeko zakho ziguquka okanye unqwenela ukutshintsha nayiphi na imimiselo kunye neemeko kwimvume yakho yesikhashana yeKhanada, kufuneka uzalise kwaye ufake iSicelo sokutshintsha imeko okanye ukwandisa ukuhlala kwakho eCanada njengomSebenzi.
Iinkcukacha zoqhagamshelwano kwiimvume zesikhashana zeCanada
Nceda ukhangele iofisi ye-visa kwingingqi yakho nayiphi na imfuneko yendawo yangaphandle, ngolwazi olongezelelweyo okanye ukuba unemibuzo malunga nesicelo sakho somvume wesikhashana weKhanada.
I-American Revolution: I-Battle of Nassau
Iingcebiso zokuqhuba isifundo seBhayibhile esihle kubantwana abangamaKristu
Ziziphi iinambuzane zase-Aquatic Zisitshela Ngomgangatho Wezamanzi
I-Muzzle kwi-Gunarms Gun Terminology
Amaqela Okholo Aphika Imfundiso KaBathathu Emnye
Yintoni iGraceland Mansion? Ikhaya likaKumkani